मेसी र रोनाल्डोको पुस्ता घर फिर्ता होला ? – Everest Dainik – News from Nepal
मेसी र रोनाल्डोको पुस्ता घर फिर्ता होला ?
दुई साताअघिदेखि रूसमा फुटबलकै सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता विश्वकप चलिरहेको छ । विश्वकपमा ३२ राष्ट्रका ७ सय ३६ खेलाडीले आफूलाई सिद्ध गर्ने प्रयास गरे र गरिरहेका छन् । प्रतियोगिता जुन १५ जुलाईसम्म चलिरहनेछ ।
आइतबार रातिसम्म ९समूहचरणबाट १६ र नकआउट चरणबाट ४ गरी० २० टोलीका ४ सय ६० खेलाडी प्रतियोगिताबाट घर फर्किसकेका छन् । त्यही हूलमा विश्वकपको उपाधि उचाल्दै महान् खेलाडीको पगरी गुथ्न रूस पुगेका मेसी र रोनाल्डोले पनि शनिबार घर फर्कने टिकट पक्का गरिसकेका छन् ।
मेसी र रोनाल्डो मात्र होइन, साबिक विजेता जर्मनी र इजिप्ट समूह चरणबाट बाहिरिँदा थोमस मुलर, टोनी क्रुस र मोहम्मद सालाहजस्ता उत्कृष्ट खेलाडीले पनि रूस भ्रमण टुंग्याइसकेका छन् ।
विगत एक दशक विश्व फुटबलमा आफ्नो दबदबा कायम राख्न सफल मेसी र रोनाल्डो बाहिरिए पनि विश्वकपबाट किलियन एमबाप्पे, गाब्रियल जिसस, ह्यारी केनजस्ता अन्य युवा खेलाडी उदाउने निश्चित छ । रूस विश्वकपमा अहिलेसम्म हेर्दा अबको फुटबल रोनाल्डो र मेसीको पुस्ताबाट नयाँ पुस्तामा स्थानान्तरण हुने सन्देश दिएको छ । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
ट्याग्स: messi, Mohammad salaha, ronaldo, Thomas Mular